मान्छेले आफ्नो मातृभाषा बिर्सन सक्छ ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperमान्छेले आफ्नो मातृभाषा बिर्सन सक्छ ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
मान्छेले आफ्नो मातृभाषा बिर्सन सक्छ ?
आजकल यो प्रश्न व्याप्त छ किनभने विश्वव्यापीकरणका कारण विश्व एकजुट हुँदै गइरहेको छ । अमेरिकीहरू भारत, चीन र अन्य धेरै देशहरूमा काम गर्न जाँदैछन् । त्यसैगरी केरलादेखि कश्मीरसम्मका भारतीयहरू अन्य देशमा पढ्न, काम गर्न वा व्यापार गर्न जान्छन् । नेपालीहरू युरोप अमेरिका बसाइँ सर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा कुनै अंग्रेज आएर नेपालमा काम गर्न थाल्यो भने उसले आफ्नो मातृभाषा बिर्सन्छ कि मातृभाषा अंग्रेजीलाई ?
मातृभाषा बिर्सनुको कारण के हो ?
यो प्रश्नको कारण के हो भने, जब एक व्यक्ति अर्को देशमा काम गर्न जान्छ, उसले आफूलाई त्यो देशको भाषा र संस्कृतिमा ढाल्छ । इङ्ल्यान्ड जाने मानिसहरूले अंग्रेजीमा मात्रै कुरा गर्नेछन् । त्यसैले जब हाम्रो देशको भाषा कम हुँदै जान्छ, तब हामी आफ्नो भाषाको सूक्ष्मता बिर्सन थाल्छौँ । हरेक भाषामा बोल्ने विशेष तरिका हुन्छ । ठट्टादेखि गम्भीर कुराकानीसम्म हरेक भाषाको आ–आफ्नै स्वर हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जब तपाईं कुनै कारणले अर्को देशमा जानुहुन्छ, तपाईंले जीवन शैलीसँगै त्यो देशको भाषालाई पनि अपनाउनुहुन्छ । उसको स्वरमा कुरा गर्न खोज्दा, तपाईं आफ्नो मातृभाषाबाट काट्न थाल्नुहुन्छ ।
आफ्नो भाषा गुमाउने विज्ञान के हो ?
तर, कुरा त्यति समतल छैन । आफ्नो भाषा गुमाउने विज्ञान धेरै जटिलता छ । तपाईं कति समयदेखि आफ्नो देशबाट टाढा बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्दैन । अर्को भाषा बोल्ने मानिसहरूसँगको तपाईंको अन्तरक्रियाले तपाईंको आफ्नै भाषामा प्रभाव पार्छ । तर कहिलेकाहीँ मातृभाषा बिर्सनुको कारण भावना, पीडादायी सम्झनाहरू हुन् ।
र यो लामो समयदेखि आफ्नो मातृभूमिबाट टाढा रहेकाहरूलाई मात्र हुँदैन । दोस्रो भाषा सिक्ने मानिसहरू प्रायः आफ्नो मातृभाषाको कमजोर सम्झने हुन्छन् । यूकेको एसेक्स विश्वविद्यालयका भाषाविद् मोनिक स्मिड भन्छिन् कि तपाईले अर्को भाषा सिक्ने बित्तिकै तपाईको मातृभाषासँग प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छ ।
बालबालिकाले आफ्नो भाषा बिर्सनु सामान्य कुरा हो ?
मोनिका आजकल भाषाको यो विचलनमा अनुसन्धान गरिरहेकी छिन् । बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषा छोडेर अर्को भाषा सिक्नु सामान्य कुरा उनीहरूले पाएका छन् । कारण स्पष्ट छ, बच्चाको मस्तिष्कले नयाँ कुराहरू सजिलैसँग सिक्छ । उसलाई पुराना कुरा बिर्सन सजिलो हुन्छ । १२ वर्षको उमेरमा बच्चाको भाषा मौलिक रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ । अर्थात्, उसले आफ्नो मातृभाषा पूर्ण रूपमा बिर्सन सक्छ । यदि कुनै बच्चा जन्मेको देशबाट निकालेर नौ वर्षको उमेरमा अर्को देशमा बसोबास गरेमा उसले आफ्नो मातृभाषालाई पूरै बिर्सन्छ ।
वयस्कहरूले आफ्नो मातृभाषा बिर्सनु असामान्य छ ?
तर, वयस्कहरूको लागि आफ्नो भाषा पूर्ण रूपमा बिर्सनु असामान्य छ, जुन विरलै देख्न सकिन्छ । धेरै दुःखको कारणले मात्र मानिसले आफ्नो भाषा बिर्सन्छ । मोनिका स्मिडले दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी छोडेर बेलायत र अमेरिकामा बसोबास गर्ने यहूदीहरूमाथि अनुसन्धान गरेकी थिइन् । मोनिकाले आफ्नो मातृभूमिबाट कति लामो समय टाढा रहेको उनको भाषाले फरक पार्दैन भनी थाहा पाए ।
आफ्नो मातृभाषा बिर्सनुको सबैभन्दा ठूलो कारण उसले नाजीहरूको अधीनमा भोगेको पीडादायी अनुभव थियो। नाजी शासनको सतावट सुरु हुनु अघि अन्य देशहरूमा बसाइँ सरेका यहूदीहरूले जर्मन भाषा राम्रोसँग बुझेका थिए। तर हिटलरको हातबाट धेरै पीडा भोग्नेहरू आफ्नो मातृभाषाबाट धेरै टाढा थिए, जबकि उनीहरूले विदेशी भाषा बोल्ने देशमा कम समय बिताए ।
अनुभवको प्रभाव कत्तिको पर्छ ?
दुःख र पीडादायी अनुभवका कारण मात्र यस्तो भएको मोनिका बताउँछिन् । मानिसहरूको बाल्यकालको भाषा जर्मन भए पनि उनीहरूले यसलाई भुल्ने प्रयास गरे । केही मानिसहरूले स्पष्ट रूपमा भने कि जर्मनीले उनीहरूलाई धोका दिएको छ । अब अमेरिका उनीहरुको देश हो । अंग्रेजी उनीहरूको भाषा हो ।
अनुसन्धान के भन्छ ?
लन्डनमा बसोबास गर्ने सबै देशका मानिसहरूले लगभग ३०० भाषाहरू बोल्छन् । कहिलेकाहीँ यी भाषाहरू यसरी मिसाइन्छ कि भाषाहरूको हाइब्रिड बनाइन्छ । लामो समयसम्म तपाईँ बसेको ठाउँको भाषा तपाईको दिमागमा हावी हुन थाल्छ । भाषाको यो विचलन साउथह्याम्प्टन विश्वविद्यालयकी लौरा डोमिन्गुएजले पनि अनुसन्धान गरेका छन् । लौराले बेलायतमा बस्ने स्पेनिस र अमेरिकामा बस्ने क्युबालीहरूमाथि अनुसन्धान गरेकी थिइन् । स्पेनिस क्युबा र मेक्सिकोमा पनि बोलिन्छ । त्यो स्पेनको मूल भाषा हो । तर यी सबै देशहरूमा स्पेनिश बोल्ने शैली फरक छ । जसरी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा विभिन्न प्रकारका हिन्दी बोलीहरू प्रचलनमा छन् ।